जेष्ठनागरीकलाई सम्मान ब्यवहारकोलागी रामधुनीभासिमा बनभोज कार्यक्रम -
जेष्ठनागरीकलाई सम्मान ब्यवहारकोलागी रामधुनीभासिमा बनभोज कार्यक्रम
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०४, २०७३ समय: २:५८:४९
रामधुनीभासि,फागुन ४ । जेष्ठनागरीकहरुलाई सबैले सम्मान ब्यवहार गर्नु पर्ने उधेश्यले रामधुनीभासीमा मंगलवार जेष्ठ नागरीकहरुको सहभागीतामा बनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वडा नं. ३ का नारायण श्रेष्ठको एकल आयोजना र स्थानियहरुको सहकार्यमा बनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
रामधुनीभासिका ६५ बर्ष भन्दा माथिका दुई सय भन्दा बढि बृद,दृदाहरु सहभागी भएको वनभोज कार्यक्रम वडा नं. ३ लगुना चौकमा रहेको बगैचामा समपन्न भएको आयोजक श्रेष्ठले बताए । वनभोज कार्यक्रममा बृद र बृदाहरु समुह बनाएर भजन गीत गाउँदै रामाए । सहभागी ८५ बर्षिय बृदा डोम्नी चौधरीले बनभोज कार्यक्रममा सहभागी हुदा खुसि ब्यक्त गरीन । एक दिन भएपनि सबै दुःख बिर्सिएको चौधरीले बताईन ।
त्यसैगरी जेष्ठ नागरीकलाई परिवारबाट टाढा आश्रममा नराखि परिवारमै राखि देखभाल गर्नुपर्ने अर्का सहभागी ७५ बर्षिय पबित्रा नेपालले बताईन ।
ईन्डियन आर्मिबाट रिटायर जिवन बिताई रहेका श्रेष्ठ सामाजिक उद्धार भाव गर्नु पर्ने आस्था राख्दै परिवारबाटै अपहेलित भइरहेका बृद,बृदा सबैले सम्मान गर्नु पर्ने बताए । त्यसैगरी जेष्ठनागरीकलाई राज्यले सेवा सुविधाको रुपमा दिईरहेको भत्ता वडा कार्यलयबाट पाउनु पर्ने बताए । बैंकमा लाइनमा बस्न जेष्ठनागरीलाई गाह्रो हुने भएकोहुदा मर्म बुझि वडाकार्यलयलाई बृद र बिधवा भत्ता बितरणकालागी वडा कार्यलयलाई अधिकार दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । वनभोजमा आउन नसक्नेलाई सिटिसफारीको ब्यवस्था र खानपानकालागी मासु,फलफुल लगायतका पौष्टिक आहारको ब्यवस्था गरीएको आयोजक श्रेष्ठले बताए ।